Mazic oo garsooraya final-ka koobka UCL
Football Soccer - Republic of Ireland v Sweden - EURO 2016
Xiriirka kubadda cakta Yurub ee loo soo gaabiyo UEFA ayaa Isniinti maanta ku dhawaaqay garsooraha dhexdhexaadin doona ciyaarta finalka Koobka Kooxaha Horyaalada Yurub ee 26-ka bishaan dhexmari doona kooxaha Real Madrid iyo Liverpool.
Milorad Mazic oo ah 45 u dhashay dalka Serbia ayay UEFA ku aamintay firinbiga ciyaartaasi oo ka dhici doonta garoonka Olympic Stadium ee magaalada Kief, caasimadda dalka Ukraine.
Mazic, ayaa ahaa garsoore caalami ah tan iyo sannadki 2009. Xilli ciyaareedkan wuxuu dhex-dhexaadiyay afar kulan oo ka tirsan tartanka Champions League iyo laba ciyaar oo ka tirsanaa koobka Europa League.
Wuxuu ahaa garoosihi dhex-dhexaadiyay finalki koobka Confederations Cup ee sanadki hore ee dhexmaray Chile iyo Germany. Sidoo kale wuxuu garsooray finalki koobka UEFA Super Cup ee sannadki 2016-ki dhexmaray Real Madrid iyo Sevilla.
Dhinaca kalana, UEFA ayaa u magacawday garooraha u dhashay dalka Holland, Bjorn Kuipers inuu dhex dhexaadiyo finalka koobka Europa League ee 16-ka bishaan May ka dhici doona magaalada Lyon ee dalka France.
Finalka tartankan ayaa waxaa foodda isku dari doona kooxaha Olympique de Marseille iyo Atletico Madrid.